स्मार्ट पुजारी : अनलाइनबाट पूजा, ई–सेवाबाट दक्षिणा
खबर / विशेष / फुर्सद
अंगदबहादुर सिंह काठमाडौं - मंगलबार, भदौ ९, २०७७
भिडियोमार्फत पूजा गराउँदै प. प्रज्ज्वल लुइँटेल। तस्बिर : लुइँटेलकै फेसबुकबाट
काठमाडौं बस्ने पण्डित प्रज्ज्वल लुइँटेलले यसपालि तीजको पूजा ‘अनलाईन’बाटै गरिदिए।
‘समयकाल परिस्थिति अनुसार निषेधाज्ञाको पालन गर्दै प्रविधिको सदुपयोगका साथ अनलाइन हरितालिका तीजको पुजन सम्पन्न’ उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्।
म्यासेन्जर, जुम, भाइबर चलाउन जाँगर चल्न थालेको छ।
सधैं प्रत्यक्ष भेटैरै मन्त्र फरफराउने पण्डितहरू विस्तारै मोबाइलमा रम्न थालेका छन्।
यस्तो पनि समय आउला? मोबाइलबाटै घरमै बसीबसी मन्त्र !
अहँ सोँचेकै थिएनन्।
शास्त्री भीमप्रसाद भट्टराईलाई लाग्थ्यो, कर्मकाण्ड त ठाउँमै पुगेर गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म प्रत्यक्ष भेटेरै कर्मकाण्ड पनि त गर्दै आएका थिए। सोँच्न सकुन पनि कसरी!
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दैछ। कहिले लकडाउन त कहिले निषेधाज्ञा। सारा जीवनशैली नै बिथोलिदिएको छ, यो संक्रमणले।
यसरी लकडाउन तथा निषेधाज्ञामा घर–घरमा गइ पूजा गर्न सम्भव छैन्।
पहिले–पहिले घरमै गई पूजा गर्ने बानी परेका उनी अचेल मोबाइलबाटै कर्मकाण्ड गर्न थालेका छन्। मोबाइल सधैं साथमा रहन्छ।
चिनेजानेकाले म्यासेन्जर, इमो र भाइबरबाटै कर्मकाण्ड गराउन चाहन्छन्। अर्थात् कोरोनाका कारण कर्मकाण्ड तथा पूजाआजा गर्ने परम्परा बढिरहेको छ। कर्मकाण्ड भर्चुअल हुन थालेको छ। सबैकर्म डिजिटलाइज हुँदैछ।
भीमप्रसाद अचेल अनलाइनमार्फत पूजा गर्छन् ई–सेवामार्फत दक्षिणा लिन्छन्। कोभिड–१९ ले गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्र्नुपर्ने भएकाले अहिले कर्मकाण्डले पनि डिजिटल प्लेटफर्म पाएको छ।
भलै भट्टराइले अहिलेसम्म भर्चुअल कर्म गरेको दक्षिणा लिएका छैनन्। तर, उनको खाता नम्बर माग्नेको संख्यामा भने कमी छैन।
‘अनलाइनबाट पूजा गराउनेले ई–सेवाको खाता नम्बर माग्छन् तर मैले खाता खोलेको छैन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेसम्म दक्षिणा लिएको छैन् बरु भेट हुँदा दिनुहोला भनेको छु।’
भलै उनले अनलाइनबाट पूजा गरेको कुनै दक्षिणा भने लिएका छैनन्। अहिलेसम्म ई–सेवाको खाता नखोले पनि अब भने उनले खाता खोल्ने सोँच बनाएका छन्।
‘कसैले पूजा गर्नु छ भनेपछि भिडियो कलबाटै भए पनि मन्त्र पढी कर्मकाण्ड गर्ने गरेको छु, दक्षिणाका लागि सबैले खाता नम्बर माग्ने गर्छन् तर मैले भेटेपछि दिनुहोला भन्ने गरेको छु’, उनले थपे। घरमै बसेर मन्त्र जपेर पूजा गर्ने गरे पनि उनी आफैंलाइै प्रत्यक्ष उपस्थित भएर गरेको कर्मजति भने सन्तुष्टि लाग्दैन।
प्रत्यक्ष संलग्न भइ गरिएको जति अनलाइनबाट गरिएको पूजा प्रभावकारी र शास्त्रयोग्य नहुने उनको तर्क छ। जजमान र पुरोहितको उपस्थितिमा गरेको कर्मकाण्डले आत्मसन्तुष्टि र सकरात्मक ऊर्जा तथा बढी विश्वास हुने उनी बताउँछन्।
उनले अहिले भइरहेको भर्चुअल कर्मकाण्डलाई परिस्थितिको उपज मानेका छन्। परिस्थितिले अनलाइनबाट कर्मकाण्ड तथा पूजापाठ गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाएको छ। ‘अनलाइनबाट कर्म गर्दा यसो÷उसो गर्नुस् भन्ने हो तर स्वयं उपस्थित भएजतिको प्रभावकारी भने हुँदैन्,’ उनी भन्छन्, ‘जजमान र पुरोहित सहभागी भइ गरेको कर्मको बेग्लै वैधानिकता हुन्छ।’
लकडाउनयता उनले जन्मोत्सवदेखि सबै किसिमका कर्मकाण्ड अनलाइनबाटै गरेका छन्। कोरोना भाइरसको प्रभाव रहिरहने हो भने सबै किसिमका कर्मकाण्ड अनलाइनबाट गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनी बताउँछन्।
‘कोरोना कहर अन्त्य भएन भने, विवाहदेखि श्राद्धसम्म सबै यसैगरी भडियोबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। हामीले समय परिस्थिति हेरेर चल्नुपर्छ’, पुरोहित भट्राइले भने।
अहिले परिस्थितिले अनलाइनबाट मन्त्र पढी कर्म गर्न सुरु गरे पनि यसको शास्त्रीय मान्यता नभएको उनी बताउँछन्। कर्म गराउनै पर्ने अवस्था आए आत्मसन्तुष्टिका लागि अनलाइनबाटै भए पनि कर्म गराउनु वा पूजा गर्नुमा कुनै दोष नरहेको भट्राईको बुझाइ छ।
कोरोना महामारीबाट बच्न र सुरक्षित हुन यो प्लेटफर्म आवश्यक र अनिवार्य भएको छ। अहिले भर्चुअल प्लेटफम कर्मकाण्डमा मात्र नभइ, रहेक क्षेत्रमा लागू भइरहेको छ।
यस्तै भर्चुअल दुनियाँमा जान खोज्दै छन् कर्म र मन्त्र जप्ने पुरोहित र धर्म गर्ने जजमान। जसका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् भीमप्रसाद भट्टराई।
इलामको डाँडाबारी–४ मा विसं २०३८ मा जन्मिएका भीमप्रसादले बाल्मिकी विद्यापिठबाट शास्त्री गरेका छन्। उनी अहिलेसम्म कर्मकाण्ड अर्थात् ब्राम्हणको काममा लागेका छन्। यति मात्रै होइन, भीमप्रसाद बागमती गंगा आरती सेवामासमेत काम गर्छन्।
बाल्मिकी विद्यापीठका धर्मशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा.देवमणी भट्राईले महामारीबाट बच्नका लागि सबैले सामाजिक दूरी कायम गरी सुरक्षित हुनुपर्ने बताउँदै अहिले धेरैले भर्चुअल माध्यमबाटै कर्म गरिररहेको बताए।
भर्चुअल कर्मकाण्डले निर्देशन दिइ कर्म पूरा गर्ने भए पनि पूर्णता प्राप्त नगर्ने उनी बताउँछन्।
‘धर्मशास्त्रअनुसार देवता, अग्नि ब्राम्हण र मन्त्रको सामिप्यता हुनुपर्छ, अनलाइनका माध्यमबाट गरिएको कर्मले निर्देशन दिइ सिकाउन सक्ला तर पूर्णता प्राप्त गर्दैन्’, उनी भन्छन्।
भर्चुअल कर्मकाण्ड अहिलेको परिस्थितिका लागि सही भए पनि यसले दूरगामी अर्थ नराख्ने उनी बताउँछन्। महामारीले निम्त्याएको विषम समयमा अनलाइनबाट पूजापाठ भए पनि शास्त्रीय विधिअनुसार नभएको उनको भनाइ छ।
‘धर्मशास्त्रअनुसार कर्म र कर्ताको सामिप्यता हुनु जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘भर्चुअल कर्मले बन्दाबन्दीको बेला महत्व पाए पनि यसले पूर्णता र सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन।’ महामारीको बेला भर्चुअल कर्मकाण्ड नै उत्तम उपाय हो।